VaMugabe vakaudza gurukota rinoona nezvemari, VaPatrick Chinamasa, kuti vadzore pabasa vechidiki kana kuti mayouth officers zviuru mazana maviri kunyangwe VaChinamasa vari kubuda pachena kuti hurumende haina mari yekuvabhadhara sezvo hupfumi hwenyika husina kumira zvakanaka.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye dzezvehupfumi dzagara dzichiyambira kuti kupinza vechidiki ava mabasa kuri kudzorera kumashure nyaya dzezvehupfumi.
VeIMF neWorld Bank vanoti mari iri kubhadharwa kuvashandi nehurumende yakawandisa zvinoita kuti pashaikwe mari yekugadzira zvivakwa zvakaita semigagwa, makirinika nezvimwe zvinodiwa nevanhu.
Asi sachigaro weZanu-PF Youth League kudunhu reManicaland, VaMubuso Chinguno, vanoti vanhu vakaburitsa basa vechidiki ava vari kuda kushoresa VaMugabe.
Asi ko vechidiki ava vanoita basa rei chaizvo?
VaChinguno vanoti ndivo vanobatsira vechidiki vari kumaruwa muk zvikwereti zvekutanga mabhizimisi madiki.
Vaimbova gurukota rinoona nezvemari, VaTendai Biti, avo vanotungamira bato rinopikisa rePeople’s Democratic Party, vanoti vashandi vehurumende vakawandisa zvekuti kuvabhadhara zvinosiya hurumende isina kana kobiri rekuita zvimwe zvinhu.
VaBiti vatiwo zvakataurwa neIMF neWorld Bank zvinhu zvakaoma kutevedzera muZanu-PF sezvo bato iri richikudza nyaya dzezvematongerwo enyika.
Mashoko aya atsinhirwawo nenyanzvi munyaya dzezvehupfumi, uye vachishanda nesangano ravana chipangamazano re Labor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, VaGodfrey Kanyenze, vati sezvo nyika yatarisana nesarudzo kuda kuti hurumende igumure basa vashandi ava kupedzera hoko padehwe retsindi.
Asi gurukota rezvevechidiki, VaPatrick Zhuwao, avo vange vachirwisa kuti vechidiki ava vadzorwe pamabasa, vanoti mabasa evechidiki ava haanei nezvematongerwo enyika.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachitungamira Human Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, VaDewa Mavhinga, vanoti vechidiki ava vanoshandiswa neZanu-PF mukutyora kodzero dzevanhu zvikuru munguva yesarudzo
Kunyange hazvo VaMugabe vachigara vachitaura kuti vashandi vehurumende vapihwe mari dzemabonasi nezvimwe, VaChinamasa vane makore akawanda vachitatarika kubhadhara mari idzi.